Mawqifka Somaliland Ee ku Aadan Dagaalka Ka Socda Wadanka Aynu Jaarka Nahay Ee Yemen | Saxil News Network
Hargaysa (Saxil News.com)-Wadanka Yemen waa wadan ku yaala qaarada aasiya, waa wadan carbeed, ee xuduudo badan la leh wadamo badan oo carab ah, aynu jaar ka nahay dhanka badda, waa wadan dagaalka ka socdaa hadii uu sii waaro uu saamayn weyn ku yaaln doono dhamaan wadamada aduunka iyo isu socodka gaadiidka circa iyo badda, gaar ahaana wadamada khaliijka iyo dhamaan wadamada teedsa xeebaha badda cas.
Yemen waxa ku nool dad carbeed oo haysta intooda badan diinta islaamka, waxaan look ala qaybiyaa qayb Sunni ah iyo qayb Shiico ah, loolanka ka dhexeeya labadan qaybood ayaa ah mid sulka ku haya mabda’ diineed oo durugsan oo kasoo bilaabmay wakhtigii nabigu noolaa -NNKH-.
Kooxda shiicada oo mabda’ ahaan kala duwan gudaheedu ayaa qaybaha qaarkood oo ka mid ah culimada sunigi sheegaan inay diinta islaamka ka baxeen si toos ahna uga dhex baxeen, halka qaybaha kale ay ku timaamaan inay yihiin mulxidiin iyo waxyaabo kale, waxaan labada qaybood dhex yaala kala fogaansho aan suuro gal u ahayn in laysla eego khilaafka laysna qanciyo.
Kala fagoonshaas dartii ayaa keenay in dagaalo badani dhexmaraan Suniiga iyo Shiicada oo aan hadda ka bilaabmin oo ah dagaalo soo jireen ah taariikhdana lagu hayo Dhacdooyinkii ugu caansanaa iyo siyaabihii ay u bilaabmeen dagaaladu.
Dagaalka yemen ka socday ee u dhexeeya maamulka sharciga ah iyo kooxda xuutiyiinta ee ah shiicada ayaa ah mid ku dhisan sunni nacayb iyo aar goosi ay gacanta kula jiraan dawlado caan ku ah fidinta mabda’a shiicada.
Dalka sucuudiga oo ah dalka xudunta u ah mabda’a Suniiga ah iyo dhamaan wadamada Sunniga ah ee khaliijka carab ayay khalkhal amni darro galin kartaa hadii ay sii waarto dagaalada ka holcaya Yemen, sidoo kale waxa ay saamayn balaadhan ku yeelankaraan kooxda xuutiyiintu hadii ay guulaystaan ama ay hantaan dalka gacantana ku dhigaan maamulka sare iyo awooda Yemen, ama ay waarto jiritaankooda iyo fidinta mabda’an shiicigaha dhamaan wadamada aaminsan mabda’a Sunniga ah.
Somaliland waa dal mabda’a ahaan aaminsan Sunni kuna aroora sunniyiinta lana wadaaga diin iyo fikirba wadamada sunniga ah, hadaba yemen oo ah jaarka ugu dhow ee dhanka badda cas ay wadaagaan Somaliland ayay ku yeelan kartaa saamayn aad u balaadhan dagaalada ka socda Yemen iyo fidinta mabda’a shiicga ah, dhanka amniga iyo dhanka mabda’aba.
Inakoo aan lahayn awood balaadhan oo aynu kaga gudubno badaha waawayn ama kaga hawl galno soo celinta nabada Yemen ayaa ay haboontahay inaynu mabda’a ahaan taageerno hadba halka ay bulshadeen dantu ugu jirto, kuna badbaadi karto, kuna sii waari karto, amaankeenana ku ilaashan karno, diinteenuna inoogu badbaadi karto.
Go’aanka ah in Somaliland hiil iyo hooba la ag taagantahay isbahaysiga uu gadhwadeenka ka yahay wadanka sucuudigu ee dhawaan uu madaxweynuhu ku dhawaaqay ayaa ah mid u baahan in lasoo dhaweeyo lana dhiiri galiyo.
Qalinkii: Hassan Ahmed